umtya omncinci wokuvelisela ukutya okwenza iinkuku ukutya ngemveliso encinci
1.Uyilo loomatshini weVictoria pellet kwaye ubalungiselele izityalo eziNgcono kakhulu zokuPhuhlisa iinkuku zePellet ukulungiselela iimfuno ezahlukeneyo kunye neemfuno zabathengi.
2.Lo mveliso wezinkukhu zincinci ongama-400-600kg / h weplanti encinci usebenza kwiifama ezincinci zeenkukhu., umzi-mveliso wokutya okanye ukusetyenziswa kwasekhaya ukulungiselela iipellets zokondla kungekukuphela kwenkukhu njengenkukhu, idada, amarhanisi, izagwityi ,kodwa neenkomo kubandakanya iinkomo, inkomo, umvundla, yehagu, njl.
Intshayelelo kuMgca wokuFumaneka kweNkukhu okuNcinci
Ukwenzela ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo kunye neemfuno zabathengi, siyile kwaye sizilungiselela izityalo eziNgcono kakhulu zokuNondla ngeNkukhu. Lo mveliso wezinkukhu zincinci ongama-400-600kg / h weplanti encinci usebenza kwiifama ezincinci zeenkukhu., umzi-mveliso wokutya okanye ukusetyenziswa kwasekhaya ukulungiselela iipellets zokondla kungekukuphela kwenkukhu njengenkukhu, idada, amarhanisi, izagwityi ,kodwa neenkomo kubandakanya iinkomo, inkomo, umvundla, yehagu, njl. Isityalo senziwa ngokulandela ngokuqinileyo imigangatho yamazwe aphesheya, iindleko-kunye nokusebenza okuphezulu.
Iiparamitha zobugcisa kumgca omncinci wokuveliswa kokondla
(Kwizixhobo zeenkozo kunye namasuntswana)
Igama lomatshini Ubungakanani
Umxube weSandisi seGrisi
Ndiyakwazi ukutyhoboza ingqolowa ,njengengqolowa,ingqolowa,irayisi ,iimbotyi,
Ukutyhoboza amandla 1t ngeyure,
ivolumu yokuxuba 2m³(1t)
Kwizixhobo ezixubileyo phatha
Umatshini Flat die Pellet
inokwenza ukutya kwepellet yenkukhu, igusha,
iihagu, iinkomo kunye nesinye isilwanyana
Umatshini opholileyo unokupholisa i-pellet
Umthamo unokuba ngu-500 ~ 600kg / h,700~ 800kg / h,1000~ 1500kg / h
Ukusetyenziswa: Umatshini omkhulu wokutyisa imbewu / umzi mveliso / umzi mveliso wokulima; Efanelekileyo umveliso wokutya wokugaya kwesivuno esikhulu kunye nemveliso ephezulu yokutya kweefomakazi.
Isici esiphambili: Ubume beCompact / Umsebenzi wobugcisa onokubakho kwakhona / Ukufakwa ngokulula / Ukusebenza okulula / Iindleko eziphantsi zolondolozo / Utyalomali olusezantsi. Yondla umgca wepellet onokuthi uvelise 3000-10000 Izinto zokwenza umgubo okanye iipellets zokutyisa ngonyaka. Inkqubo epheleleyo yokuthengiswa kwezinto ezizimeleyo kubandakanya ukufunyanwa kwezinto ezingafunekiyo, Ukutyumza, Ukubetha, ukomisa, ukuhambisa ukutya kunye nokupakisha. Ngexesha lokugaya, isondlo seepellets zokutya aziyi kulahleka.
(ngengca kunye nezixhobo zengqolowa)
Kondla umatshini we Crusher
Ukutyhoboza uluhlu olubanzi lwezinto,
njengealfalfa ,ingca yerayisi,iimbotyi zesoya, ingqolowa, umbona,
ingca njalo njalo.
Umatshini wokuxuba ukutya
Ngomxube wezinto zokuxuba
Umatshini opholileyo unokupholisa i-pellet ecinezelweyo
Inkukhu / Inkqubo yokwenza iPellet yeSilwanyana
Okokuqala, Izinto ezingafunekiyo ezityiwayo okanye izithako zokondla ezifana nesidlo seembotyi zesoya kunye nombona ziya kuhamba ngomatshini otyunyuziweyo zize zichithwe zibe ngumgubo ocolekileyo. Ke, kwizixhobo zokudibanisa, umgubo ungaxutywa nezinye izinto ezifana nevithamini, isixokelelwano, isidlo, ithambo, ingqolowa. Emva kokuxuba, ziya kuba zizezomeleleyo ngokupheleleyo. Ke, Imiyalezo yokutyisa iya kuthunyelwa kumatshini wokutya izilwanyana kwaye yongezwe kwiifenitshala ezifanayo ezinobubanzi obufunwayo kunye nobude. Emva kovavanyo kunye nokupholisa, iipellets zokutya kweenkukhu zingapakishwa ngqo.
Itshathi yokuhamba komtya omncinci wokuvelisela ukutya
Njengoko kubonisiwe kuMfanekiso 1, umbona kunye neembotyi zesoya (ivenkile & ngqo ukondla emhlabeni) igxunyekwe kumatshini wokuGaya 101 ndityunyulwe ibe ngumgubo ocolekileyo. Nawuphi na umgubo / izixhobo ezithambileyo, njengengqolowa, ithambo lokutya, isixokelelwano, ivithamini, njl, engadingi kutyunyuzwa, banokondla ngokuthe ngqo kuMatshini oMxube wokuBala 201 ukusuka kwizibuko layo lokutya. Zonke izixhobo zixutywe ngokufanayo kwaye zikhutshelwe kwihipper of Screw Conveyor 301 emva koko yondla kwi-Silo yokuGcina yethutyana 302 ngesixhobo sokuhambisa. Ngu Screw feeder 303, Izinto ezixutyiweyo ziyafana kwaye ziyaqhubeka nokuzondla kumatshini wokutya izilwanyana 304 emva koko iveliswe ngeepellets zokutya. Iipellets zikhutshelwa kwihipper yeBelt Conveyor 401 emva koko yondla kuMatshini wokupholisa wePellet 403 ngoMoya Lock 402. Ngenkqubo yokupholisa, entsha & iipellets ezishushu zipholile, iqondo lobushushu lepellet alikho ngaphezulu kwe-5 ℃ kunobushushu begumbi. Iipellets zokupholisa izilwanyana ezipholileyo ziphononongelwe sisikhuseli esibonakalayo 404, emva koko banako ukupakishwa.